Kaamirooyinka gacanta labaad ee Nest wali waxaa heli kara milkiilayaashii hore | Wararka IPhone
Kaamirooyinka kormeerka ee guryaha ayaa noqday mid ka mid ah aaladaha ugu isticmaalka badan, ama in la ogaado marwalba waxa xayawaankeenu sameynayo, si loo ogaado cida guriga imaaneysa marwalba ama si fudud sida Nidaam qaylo-dhaan ah oo aan qaali ahayn.
Sannadihii ugu dambeeyay, Nest wuxuu noqday mid ka mid ah soo saarayaasha ugu wanaagsan aaladahaan, xitaa in ka badan tan iyo tan ka mid noqday Google. Ahaanshaha aalad ku xiran internetka, waxaan ka heli karnaa meel kasta oo aan dooneyno. Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaarkan waa inuu heli karaa oo kaliya mulkiilaha hadda jira, oo uusan aheyn kuwa asal ahaan iibsaday, cidda ay u suurtagashay ilaa hadda.
Isla marka warkan la sii daayo, Google wuxuu si dhakhso leh u bilaabay a otomaatig otomaatig ah oo hagaajinaya dhibaatadan. Arrintaan weyn ee amniga waxaa arkay milkiile hore oo kaamirada caanka ah Nest Cam Gudaha, kamarad aan ku falanqeyno Actualidad iPhone. Sida muuqata milkiilahan ayaa ku xiray kamaraddiisa xarunta Wink smart-home.
Inaad wali kuxirantahay xarunta Wink, milkiilaha asalka ah wali wuxuu marin uheli karaa fiidiyaha taas oo soo saartay kaamiradii uu horey u iibiyay, in kasta oo uu dhowr jeer dib u bilaabay si dhammaan xogta loo tirtiro. Taasi waa, haddii, halkii laga heli lahaa taxanaha fiidiyowga, kaliya qabashada la qaado dhowr ilbiriqsi kasta ayaa la muujiyaa.
Dhibaatadu waxay tahay qalabka Nest Cam Gudaha, Bannaanka, iyo Dropcam ma haysatid ikhtiyaar aad dib ugu dejiso warshad heerka qalabka iyo softiweerka, waa ikhtiyaar ay qasab ku tahay qalab kasta.
Halkii aad ka bixin lahayd ikhtiyaarkaas, hawsha dib-u-dejinta waxay ka kooban tahay kaameradda ka saar koontada ay la xiriirto, xilligaas waa inaysan u oggolaan marintiisa mulkiilaha asalka ah, hase yeeshee koontada Wink ayaa sii waday inay sii wado marin u helka
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Kaamirooyinka gacanta labaad ee Nest ayaa wali heli kara milkiilayaashii hore